Shuruudaha Adeegga | Martech Zone
Markaad isticmaaleyso degelkan, waad oggoshahay inaad fahamsan tahay siyaasadahayaga waadna oggolaatay iyaga.
Boggan mas'uul kama noqon doono waxyaabaha ka kooban isticmaale-abuurka iyo howlaha ka socda goobta.
Waad qiraysaa oo aad oggoshahay in dhammaan waxyaabaha (qoraalka iyo warbaahinta) si guud ama si gaar ah loo isugu gudbiyo ay yihiin mas'uuliyadda keliya ee shakhsiga soo diraya maaddada, maahan boggan.
Goobtani waxay xaq u leedahay inay ku darto, ka saarto ama wax ka bedesho wax kasta oo goobta ku yaal wakhti kasta ogeysiis la'aan ama mas'uuliyad la'aan.
Adiga ayaa mas'uul ka ah waxqabadyadaada khadka tooska ah iyo sirta macluumaadkaaga.
Boggan waxay xaq u leedahay inay ka saarto waxyaabaha ku saabsan mowduucyada kale ee soo booqda sawir-gacmeedka, cunsuriyadda, nin jeclaysiga, rabshadaha, nacaybka, cayda, ama aan lahayn qiime la taaban karo.
Boggan waxay xaq u leedahay inay ka saarto wadahadalka xadgudubka ah iyo kuwa aan habboonayn.
Spam iyo is-dhiirigelin cad looma dulqaadan karo boggan waana laga saari doonaa.
Uma isticmaali kartid degelkan inaad ku qaybiso ama ku dhajiso waxyaabo sharci-darro ah ama macluumaad ama aad ku dhejiso bogagga ku lug leh hawlahaas.
Waa masuuliyadaada inaad ka hubiso wixii feylal ah ee la soo dejiyey fayrasyada, trojans, iwm.
Adiga ayaa mas'uul ka ah ficiladaada iyo howlahaaga boggan, waxaana laga yaabaa inaan mamnuuco isticmaaleyaasha ku xadgudba Shuruudaha Adeegkeena.
Adiga ayaa mas'uul ka ah ilaalinta kombuyuutarkaaga. Waxaan kugula talineynaa rakibida barnaamijka ilaalinta fayraska oo la isku halleyn karo.
Boggan waxaa laga isticmaalaa tiro ka mid ah Analytics qalab lagu falanqeeyo booqdayaasha iyo taraafikada. Macluumaadkan waxaa loo isticmaalay si loo hagaajiyo waxyaabaha ku jira bogga.
Dhammaan waxyaabaha ku jira boggan waxaa loogu talagalay ujeeddooyin macluumaad ah oo keliya. Milkiilaha boggan ma samaynayo wax matalaad ah oo ku saabsan saxnaanta ama dhammaystirka wixii macluumaad ah ee boggan ku yaal ama laga helo isagoo raacaya isku-xir kasta oo boggan ku yaal. Mulkiiluhu mas'uul kama noqon doono wixii khaladaad ama dhaafis ah ee ku jira macluumaadkan ama helitaanka macluumaadkan. Mulkiiluhu mas'uul kama noqon doono wixii khasaaro ah, dhaawacyo ah, ama waxyeelo ah ee ka yimaada bandhigga ama isticmaalka macluumaadkan. Shuruudahaan iyo shuruudaha adeegsiga waa la beddeli karaa waqti kasta iyo ogeysiis la'aan.